Kumbirai Mafunda from the Zimbabwe Lawyers for Human Rights says is hopeful that the high court will release the activists on bail, June 3, 2019.
Mutauriri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaKumbirai Mafunda, vambosungwa nhasi kudare remajisiriti reRotten Row vakazoburitswa mukati memaawa matatu mushure mekupindira kwemagweta avo pamwe nevakuru vakuru vemapurisa mudunhu reHarare.
VaMafunda vasungwa pamwe chete nenhengo nhatu dzeZimbabwe National Students Union, Zinasu.
VaMafunda vaudza Studio7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengo nhatu dzeZinasu idzo dzange dzasungwa padare.
Mapurisa asungira VaMafunda kuti vange vachishandisa tsamba yavo yebasa ya2019.
VaMafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa yepadare vakazoendeswa kuHarare Central, uko vazoburitswa mushure mekupindira kwemagweta eZHLR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Nhengo dzeZINASU dzinoti, Tapiwanashe Chiriga, Liam Kanhenga naNancy Njenge idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbove munyori webato iri, VaMakomborero Haruzivishe, dzasungirwa nyaya yekufamba famba padare zvisina mwero.
VaMafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo.
Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti-Guwuriro, vapa mutongo wekutiVa Haruzivishe vagare mutirongo kudzamara National Lockdown yapera mushure mekunge vatadza kuuya kudare musi wa22 Chivabvu, gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemutemo.
Asi gweta raVaHaruzivishe, VaObey Shava, vati VaHaruzivishe vakaenda kuudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akaiti zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi.
Vati havana mufaro nemutongo wapihwa nedare nhasi.
VaShava vaudzo Studio 7 kuti vari kudzokera svondo rinouya sezvo VaHaruzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana neyange iri mudare nhasi.
Muimwewo nyaya, vaoimbove gurukota rematunhu, VaIgnatius Chombo, avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu masitendi muHarare nekwaZvimba zviri kunze kwemutemo, vapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba.
Gweta raVaChombo, Professor Lovemore Madhuku, vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti VaChombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapihwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa.
Mutongi wedare, VaStanford Mambanje, vati VaChombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kuSouth Africa vakadzoka kapfumbamwe.
Zvichakadai Zimbabwe Electoral Commission yazivisa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette kuti bato reZanu PF radoma VaFredrick Shava naAmai Dorothy Mabika kuti vatore zvigare zvakasiyiswa muSeneti nekushaya kwaVaSibusiso Moyo mudhunu reMidlands naDr Ellen Gwaradzimba kumaManicaland.
VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika.